FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MENA COONHOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mena Coonhound
'Little Miss Lou dia Redbone Coonhound madio. 8 volana izy amin'ity sary ity. Izy dia tena mihetsika ary tiany ny mankeny amin'ny valan-javaboary misy dobo sy vorona manodidina hanenjika. Tiany ny milomano ary milalao tontolo andro any ivelany. Ary ny ankamaroan'ny zavatra rehetra dia tia ny kilalao masiaka! Tena be fitiavana izy ary tia ny saina rehetra azony! Rehefa any an-trano izy dia milamina ary matory matetika. '
Lisitry ny alika mena mifangaro mena
miloko mena manopy
orona retriever volamena mivadika mavokely
Ny Redbone Coonhound dia coonhound tsara tarehy sy matanjaka ary mahery. Manana loha madio sy modely tsara izy, ary mijanona eo anelanelan'ny tampon-dohany sy ny orona. Ny sofina lava sy mihantona mipaka hatrany amin'ny tendron'ny orona rehefa manaraka fofona ny alika. Tazonina mahitsy ny rambony. Ny paws dia matevina sy toy ny saka, miaraka amin'ny pady matevina sy matanjaka. Ny hoditra dia loko mena manankarena. Mamirapiratra sy malama ny palitao, mandry izy ary fohy toy ny an'ny a Beagle . Ny loko palitao dia misy mena, ary mena misy fotsy kely. Na dia mety misy dian-tongotra fotsy amin'ny tongony na tratrany aza ny Redbones, ity alika sariaka sy kanto ity no coonhound miloko matevina.
Ny Redbone Coonhound dia faly, mahonon-tena ary tena tsara amin'ny ankizy. Mety ho feno firaiketam-po mahagaga izy io ary misy hodi-kazo maneno maneno. Tiany ny miaraka amin'ny olony. Raha notezaina tao an-trano izy tamin'ny alàlan'ny alika kely, dia hifanaraka tsara amin'ny fiainam-pianakaviana. Coonhounds dia mpihaza voajanahary avokoa, ary tsy sarotra ny manazatra ny karazany hanaraka fofona ary hamaky vato amin'ny fitrandrahana. Ny Redbone dia maniry mafy ny hampifaly ny tompony. Ny taolana mena dia mafana orona kokoa, afaka mitady, ary vodin-kazo haingana kokoa noho ny coonhounds maro hafa. Toy ny coonhounds hafa, ny Redbone dia mailo, mailaka ary afaka miasa amin'ny karazana toetr'andro amin'ny faritra sarotra. Ny fahaizany mandanjalanja dia mahasoa azy ireo rehefa mihaza any amin'ny tany mimanda na amin'ny tany mideza sy be vato. Miaraka amin'ny herin'ny tertera sy ny tanjaky ny Husky, ny Redbone no nofinofy mpihaza mafana rehetra. Ny fikajiana hazo voajanahary dia nambolena tao amin'ny Redbone, nahatonga azy ho manam-pahaizana manokana amin'ny fihazana coon. Saingy mahay ihany koa izy amin'ny fandehanana sy orsa hazo, cougar ary bobcat. Rehefa ampiasaina amin'ny lalao i Redbones, dia matetika no mihaza anaty fonosana. Fantatra fa ny alika mena dia alika be rano. Ao an-trano izy dia be fitiavana sy tsara fanahy. Tokony ho tsara ny taolana Mena ifaneraserana tamin'ny mbola kely dia nampianatra fankatoavana tsotra toa mandeha amin'ny tadiny . Mitandrema amin'ny saka sy biby hafa tsy kaninina. Raha notezaina tamina saka an-jaza izy ireo dia mety ho tsara fa ny Redbone Coonhound kosa manandrana mihaza saka toa raccoons . Ny Redbone Coonhounds dia mandena betsaka matetika, fa ny sasany kosa tsy mino mihitsy. Miankina amin'ny bikan'ny molotra daholo izany. Ny vava tena miendrika coonhound dia hilentika be. Ny Redbone Coonhound dia mila hentitra, milamina, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana mba ho milamina ara-tsaina .
Hahavony: 21 - 27 santimetatra (53 - 66 cm)
Lanja: 50 - 70 pounds (23 - 32 kg)
Matetika dia salama ara-pahasalamana, na dia misy tsipika aza mahita ny anjarany amin'ny hip dysplasia.
Ny Redbone Coonhound dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara izany. Ireo alika ireo dia somary tsy miasa ao anaty trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Ny palitaony amin'ny toetrandro rehetra dia mamela azy ireo honina sy hatory eny ivelany ary hiasa amin'ny karazana tany rehetra.
Mila fampihetseham-batana be ity karazana ity. Mila entina isan'andro izy ireo MANDEHANA na jogging. Teraka mpihaza voajanahary ny Coonhounds, noho izany dia manana fironana handositra sy mihaza izy ireo raha tsy voatazona fefy tsara rehefa manao fanatanjahan-tena samirery.
Tokony ho 11-12 taona eo ho eo
Ny fikosehana tsindraindray dia vita. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana.
Taona maro lasa izay ny ankamaroan'ny mpihaza coon izay manana alika mena tsy fantatra razambe, fa voaporofo ny fahaizany amin'ny fanarahana sy rakotra hazo , niantso ny alikan'izy ireo hoe 'Taolana Mena.' Avy eo ny mpiompy matotra vitsivitsy izay natokana ho an'ny karazany sy ny fanatanjahan-tena dia nanomboka ny fampielezan-kevitra mifantina mba hamokarana hound miaraka amin'ny toetra ilaina mba hanaovana coonhound ambonimbony izay hiteraka tena loko raha oharina amin'ny loko. Ireo mpiompy any amin'ny faritra atsimo amerikana, Tennessee ary Georgia dia marina, maniry hound miaraka amin'ny hafainganam-pandeha kokoa ary mafana kokoa noho ny maro amin'ireo coonhound efa misy. Ireo alika voalohany dia nantsoina matetika hoe 'Saddlebacks.' Mena ny loko ambadika, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nanana marika mainty. Amin'ny alàlan'ny fiompiana voafantina, nopotehina ny lasely mainty ary nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Redbone Coonhounds ireo alika mena mena. Toy ny tranga misy amin'ny ankamaroan'ny karazana coonhound hafa, ny razamben'ny Redbone dia Foxhounds . Ny lakroa Bloodhound dia voalaza fa natao, ary voalaza ihany koa fa ny tratran'ny tratra sy ny tongotra fotsy izay mbola miseho indraindray amin'ny zaza mena Redbone. Ny vokatr'io fangaro io dia mahatonga azy ireo ho alika mpihaza azo itokisana, satria ny haben'ny antonony, ny fisehoan'i Foxhound-ish ary ny herim-pony dia voajanahary. Ampiasaina indrindra ho an'ny coon hazo izy ireo, saingy azo ampifanarahana amin'ny lalao hafa, anisan'izany ny saka lehibe. Ity hound ity dia mety nantsoina tamin'ny mpiompy tany am-boalohany, Peter Redbone avy any Tennessee, na dia natao tany Georgia aza ny ankamaroan'ny fitomboany. Ny tahiry fototry ny andro maoderina Redbone dia avy tamin'i George F.L. Birdsong any Georgia, izay mpihaza amboahaolo sy mpiompy amboahaolo. Nahazo ny fonosan'ny Dr. Thomas Henry tamin'ny 1840 izy. Ny Redbone no karazany coonhound faharoa nisoratra anarana tamin'ny UKC, ny voalohany dia voasoratra tamin'ny 1902, roa taona taorian'ny Black and Tan. Androany dia ampiasaina amin'ny fihazana rakikira sy alika mpiara-mitory io. Ny Redbone Coonhound dia neken'ny AKC tamin'ny 2009.
'16 herinandro i Lucy. Izy dia Redbone Coonhound feno fankatoavana UKC feno angovo. Vao tsy ela akory dia hitany ilay rano, ary mbola tsy azony antoka tsara, nefa mahay milomano tsara izy. Sariaka amin'ny alika REHETRA izy, tia miaraka amin'ny olona ary tia milalao miaraka amin'izy roa. Ao anatiny dia tia matory miaraka amin'ny olony izy, fa any ivelany kosa dia entin'ny tany foana ny orony, mitady zavatra hitsakoana na hilalao. Alika tsara izy, izay tongotra sy sofina daholo. '
Ember the Redbone Coonhound toy ny alika kely amin'ny 6 volana mandry eo amin'ny ahitra.- 'Alika be fitiavana izy.'
Ranger the Redbone Coonhound
Romeo sy ny 'clone' -n'i Jameson ilay alika kely nipetraka teo amin'ny seza
Annie the Redbone Coonhound
Crockett the Redbone Coonhound toy ny alika kely
kilalao anglisy spaniel poodle mix
'Crockett the Redbone Coonhound dia nihalehibe avokoa - nilanja 98 lbs. ary alika mamy indrindra. Drool betsaka, fa tianay izy. Milomano tsara koa. '
Hijery ohatra misimisy momba ny Redbone Coonhound
Sary mena Redonja Coonhound 1
Redbone Coonhound sary 2
Redbone Coonhound Sary 3
Zavatra mpiandry ondry husky malamute Mix
amerikana akoho amerikana akoho fotsy sy fotsy
Basset nanenjika shar Pei afangaro alika kely amidy
karazana retriever volamena izay mijanona kely
asehoy ahy ny sarin'ny bulldog